Inay ka filo ka fado tahay oo ay gabyaaga xigi doona kii hadda dhameeyey iyo gabaygiisu sidduu noqon doonaba dadweynuhu, tuhun waa halkiisee, u tooghayaan ayaa qiimaheeda samada ku laala.
Silsiladdaha caan baxay waxaa ka mid ah Guba. Guba markaan leenahay waxaan ujeednaa Gubadii dhabta ahayd ee Ogaadeen dhexdii ka fuftay ee 13ka gabayaa oo wada qoyskaa ahi ka qaybqaateen. Waxaa kaloo ka mid ah silsiladdaha caanka ah Rayad. Rayad waa silsiladdii Cali-dhuux Aadan Goroyo billaabay, kuwo aan xogogaal ahaynina si khaldan iyadna Guba ugu yeedho. GUBA Guba waxay curatay abbaaraha horraantii aad, waxayna socotay muddo 10 sano ku dhow.
Waxay ka koobnayd ugu yaraan 13 gabay waxayna ka billaabatay Iriirka Siiga Boqorka oo ku yaala banka caanka ah ee Qorraxeey. Waxay silsiladdani mudan tahay raadgooyo dhinac walba ah si gabayadii qaangaadhka ahaa ee la isdhaafsaday oo dhamaystiran loo helo. Gabayada aan hadda gacanta ku hayno iyo ragga isugu buntuftay silsiladdaa markii aanu qiimeynay, waxaa hubaal ah Guba taabideedu inay suugaanta Soomaaliyeed xarago iyo maamuus ku kordhin doonto.
Wiilal xidid iyo martiba ahaa oo loo loogay hase yeeshee hadal aan dhaqanka Soomaalida ku habboonayn la maqashiiyey ayey ka kacday.
Waxay silsiladdani u xuub-siibatay hal-xidhaale iyo in fagaare labadii dhinac ee isku hayey ku kala foodqaadan. Waxaa ku libaystay oo xujooyinkoodii la furi waayey Faarax Caytame iyo raggii la qeyrada ahaa. Waxay dhexmartay laba qoys oo Ogaadeen ah sida cinwaankaba ka muuqata, waxayna socotay muddo dheer.
Wax la isula hadhay iyo maaddo laga gabyi karo oo raggii soo galay carabka la gafeyna lama sheegin. Labada dhinacba rag tiiri ah ayaa soo gafray gabayo dhammaan boqol lagala bax ah. Rag kale ayaa jiray. Waxay silsiladani u baahan tahay baadhis qoto dheer. Waxaa kale oo xusid mudan Maxamuud Cali Beenaleey oo aan labadaa qoys midna ahayn inuu gabay dhexdhexaad ah ku darsaday kadib markii niman shirqool waday ay isku dayeen inay kusoo jiidaan hardankii maansada.
Ninka rabay inuu Maxamuud soo galo gabayga labada dhinacba waa lagu sheegaa, waxayse u badan tahay inuu Reer Warfaa ahaa. Waxay ka billaabatay Doollo. Waxay socotay mudo dheer waxaana aakhirkii bud-dhige u noqday Maxamed Cumar Dage oo habeenkii ay bil kowsatay waa wiil la yidhi. Maxamed wuxuu tiriyey gabayo dhawr ah oo Cali Dhuux ku qasbay inuu calanka cad taago silsiladdiina dabro.
Silsiladdani waxay ka mid tahay kuwa ugu magac dheer suugaanta Soomaaliyeed xilliga ay socotay, deegaanka ay ka curatay, raggii soo galay, mawduuca ay ku saabsanayd, iyo sababo kale awgood. Camanje ma arag, halna sida dhaqankanagu yahay ma xadno ee haddii aan dhac u badheedhno geel kii Lafa-Ruug iyo Hiil Weyne oo kale ah ayaan mooraduugnaa ayuu ku dacwiyey, hase yeeshee nimankii warkaa way qaadan waayeen.
Wuxuu haddaba codsaday inay u yimaadaan si uu kitaab baallaha u jaro. Way usoo shireen iyagoo isleh ha idiin dhaarto. Kolkii dhaar laga sugayey ayuu gabay tiriyey.
Orda oo waxaad doontaan soo dira ayuu Camanje isku koobay. Muddo ayuu sugay hase yeeshee waxba wuu ka iman waayey haddii uu toydayna waxaa loo sheegay in nin gabya oo qurbaawi ah oo dhoof ku maqan lala sugayo. Bal ha iska yimaado oo wax uun hasoo diro ayuu yidhi Camanje.
Xusid iyo magac silsiladeed ha joogtee, uma dhawa mid qudha kuwan kale ee aan kusoo qaatay qoraalkan. Waxay, aragtidayda, u soo jiiday sooyaalka suugaanta Soomaaliyeed waji-gabax balaadhan. Ninkii billaabay wali ma hayo, laakiin ragga caanka ah ee soo galay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Dhoodaan, Yuusuf Dheere Maxamed Sugaal, Gen.
Dhoodaan gabayga uu silsiladdan ku leeyahay ayey magacyada abwaanada ka qeyb qaatayi ku dhan yihiin. Waxay ahayd mid abwaano si gooni ah isu yaqaana, isku raasna kasoo jeeda oo is hadal fahma u dhaxaysay. In kasta oo aanan gabayada kale badankooda arag, haddana waxaad ka fahmaysaa midka Dhoodaan in abwaanada kale isku aragti dhawaayeen, Dhoodaanna aragti tooda ka duwan ku doodayey.
Waxaa la xaqiijiyey in Khaliif Carabaha joogay markii uu gabaygii ugu horeeyey mariyey. Waxay ahayd silsilad dawladii Maxamed Siyaad mucaarad ku ahayd. Khaliif oo dhinac ah iyo intooda kale oo dhinaca kale ah ayey ku socotay, waxaase ugu cadcaddaa ragga Khaliif geed walba ka saaray Dharbaaxo Jin oo aad moodo inuu si gooni ah ubbada ugu biyeystay inaan Khaliif kala nabar dambayn. Dharbaaxo Jin wuxuu gabay-hayeen u ahaa Soomaalida inteeda kale Khaliifna qoyskiisa.
Waxaa ka mid ahaa beydadkii ay isdhaafsadeen:.
Maalinta Gabayada Aduunka iyo Liiska Abwaanadii ugu Caansanaa Soomaaliya inta Gabayda